बाल नाटक : बाल पुकार १ - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कथा : आँसुको रङ्ग नीलो
कथा : तिमीहरु माया गर्न जान्दैनौ →
बाल नाटक : बाल पुकार १
Sahitya - sangrahalaya | January 7, 2015
कती पटक पढियो : 165
(एउटा केटो झोला बोकेर मञ्चमा देखा पर्छ , एकछिन घुमेपछि सबैतिर हेर्छ र अभिनयका साथ भन्न थाल्छ )
नपाली पनको अस्तित्व यहाँ सङ्कटमा पर्या छ ।
सपुतहरु छन् कहाँ आज लेकबेंसी खोज्दैछु ।
लिएनौ कहिल्यै शिक्षा र दीक्षा ती बूढा अग्रजको ।
(टायर बाल्दै दुइ तीन जनाको प्रवेश )
देख्तछु यहाँ सडकबीच टायर बालेको ,
क्षणभर मै त्यहाँ भिडन्त भयो दुइपक्ष माझमा,
हस्पिटल पुगे विद्यार्थी सबै पुगेनन् घर साँझसम्मा ।
(‘विद्यालय बन्द’ लेखेको ब्यानर र ‘शिक्षक संघ’ लेखेको ब्यानर बोकी प्रवेश )
शिक्षा र दीक्षा सब बन्द भए ताल्च छन् स्कुलमा,
शिक्षक पनि उत्रिए सबै सडक बिस्कुनमा ।
के पाउनु छ र ! के गुम्यो भन्छौ रित्तो त्यो सडकमा,
समाऊ किताब नेपाली पुत्र नलाग भड्काउमा ।
(इटा, ढुङ्गा र हातहतियासहित केही व्यक्ती प्रवेश)
हातमा किताब कापी र कलम बिर्से कि तिनले ,
लेखपढ गर्ने समय यही हो नभुलौं सबैले ।
कि भिर्नुपर्छ सबैले एक दिन भिखौरे यो झोला ।
(हातहतियार तथा ब्यानर बोकेको एउटा जुलुस आउँछ, त्यो केटालार्इ पनि उनीहरुले तान्छन् )
पढ्न देऊ मलार्इ सपना साकार पार्नेछु नेपालको ।
बन्दुक बोक्ने यी हाम्रा हात अवश्य होइनन् दाइ ,
बिन्ती छ मेरो शिक्षाको ढोका खुलाऊ सबलार्इ ।
(टाउकामा रगत बग्दै गरेको केटो आएर लड्छ)
इटा र ढुंगा बम-बारुद फ्याँक्दा को रुन्छ धरधरी ?
नेपाली भाइ रुँदछ रगत बगार्इ भलभली ।
के तिमी दाजु म भाइ होइनौं किन घर भाँडेको ,
नेपाल आमा चाहन्छिन् आज सदभाव बाँडेको ।
( केही समयपछि पर्दा खुल्छ, नेपथ्यबाट साना बालबलिका रोएको आवाज आउँछ , केही समयपछि श्रिङ्खलायुक्त्त महिला (नेपाल आमा) प्रवेश गर्छिन् र भन्छिन् )
नेपाल आमा – म नेपाल आमा हुँ । आज मेरा काखे छोराछोरी एक आपसमा लडिरहेका छन् । कति जना टुहुरा भएर सहाराहीन भएका छन् । खै , यिनको उद्धार कसले गरिदेला ? आज म सयौं पुत्रशोक बेहोरिरहेकी छु । कति छोराहरु मर्ने बेलामा मलार्इ पुकार्छन्, कति भोकभोकै मेरो नाम लिएर चिच्याइरहेका छन्i । यो म कसरी सहुँ ? जति बाँचेका छन् तिनीहरुले शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
(ठूलो सास फेर्दै ) हरे आज यो वेदना म कसरी सहुँ ? ( भुर्इमा घुँडा टेकेर रुन थाल्छिन् ) अँ ह……..ह……ह……….ह २ मेरा पुत्रहरुलार्इ सत्बुद्धि मिलोस् २ अँ ह……ह…….ह……ह ।
( केही समयपछि मञ्चमा पाँच जना केटा र एउटी केटीको प्रवेश हुन्छ । पहिलो लङ्गडो हुन्छ, दोस्रो बैसाखी टेकेको , तेस्रो हात नभएको, चौथो अत्यन्तै फाटेको लुगा लगाएको साथमा एउटा केटा र एउटा केटी) लङ्गडो(बैसाखी टेकेको संग) तपार्इ को हो ? के भएको छ र बैसाखी टेक्नुभएको ? भन्नुहोस् न ?बैसाखी( (रुन्चे स्वरमा ) खै के भनौं , भनेर साद्धे नै छैन , बुबामुमा……………..बुबामुमा……………..(रुन्छ)
हात नभएको – (फाटेको लुगा लगाएको संग) ए दाइ तपार्इ को हुनुहुन्छ ? झोलामा के बोकेको , खानेकुरा हो ? फाटेको लुगा लगाएको आफ्नो झोलातिर देखाउँदै) होइन भाइ होइन, यी त किताब हुन् । खाना त मैले दुर्इ दिनदेखि खाएकै छैन, मेरा बुबाले मर्ने बेलामा यी कितब नै तिम्रा जीवनका साथी हुन् भन्नुभएको थियो ।
(सुक्क सुक्क गर्छ )
केटो((त्यहाँ भएका सबैलार्इ हातले समात्तै) नरोऊ साथी नरोऊ – हेर हाम्रो पनि कोही छैन । हामी पनि केही दिनदेखि अनाथ भएका छौं । अब हामी सबै जना एकै ठाउँमा बस्ने ।लङ्गडो (केटालाइ) अनि भाइ तिमी चाहिं कसरी अनाथ भयौ ?
केटो – (रुदैं) हे मेरा साथी – वेदनाको घाउ आलै छ, अहिले नकोट्याइ देऊ २ । ( अँ ह……..ह………ह……….ह , मेरै आँखाका अगाडि मेरा बुबामुमा………….अँ ……ह………………ह )
केटी – ( केटालार्इ संझाउँदै) हेर अब हामी सबै साथी भयौ । हामी सबैको दु:ख एउटै हो । अब सुर्ताएर फाइदा छैन, जे भयो त्यसलार्इ भुलिदिऊ । अँ साचि हाम्रा बाबाले भन्नुहुन्थ्यो – मानिस पढेर मात्र ठूलो मान्छे बन्छ । हामी सबै ठूलो मानिस बन्नुपर्छ ।बरु कुनै विद्यालय खोजेर शिक्षकहरुलार्इ बिन्ती गरौं न ।
केटो – हामीलार्इ खाने कुरा त छैन , पढ्ने कुरा गछर््यौ तिमी ।
फाटेको लुगा लगाएको – यी बहिनीले सारै राम्रो कुरा गरिन् , मलार्इ चित्त बुझ्यो । हामीले पढ्नैपर्छ ।
(सबैले स्वीकारको टाउको हल्लाउँछन्) खाना त हामीले धनी मानिसले खाएर फ्याँकेको ठाउँबाट बटुलेर बाँडेर खाआैला । मैले दुर्इ तीन वर्षदेखि त्यसरी नै खादैछु । हुन्न र ?
( सबैले हुन्छ भन्छन्)(उनीहरु विद्यालयतिर अघि बढ्छन् । मञ्च एकफन्को घुमेपछि विद्यालय लेखेको बोर्ड देख्छन् । तर त्यहाँ ‘विद्यालय बन्द’ भनेर लेखिएको देख्छन् । रुन्चे मुख लगाएर मुखामुख गर्छन् ।
एउटा पत्रिका बेच्दै कराउँदै आउँछ ।– बम पडि्कयो – चालिस जनाको मृत्‍यु , सयौं बालबालिका घाइते । पत्रिका पढौं । (पत्रिका बेच्ने जान्छ ।)
केटो – ( सबेैतिर हेरेर ) अब हामी के गर्ने ? कहाँ जाने ? हाम्रो योजना त यहीं आएर टुंगियो । अब चाहिँ के उपाय निकाल्ने ?
केटी – यस्तो बेलामा पनि हामीले कसैको सहारा पाएनौं तर मेरी आमाले कसैको सहारा पाइएन भने भगवान्लार्इ पुकार्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । हामी जस्ता बालबालिकाको पुकार त छिट्टै नै स्वीकार्नु हुन्छ रे ।
लङ्गडो – त्यसो भए हामी सबै मिलेर भगवानलार्इ पुकारा गरौं, भगवान्ले हाम्रो पुकार अवश्य सुन्नुहुनेछ ।
सबै जना – ल अब हामी सबै भगवान्लार्इ पुकार्न थालौं ।
(पर्दा बन्द हुन्छ , नेपथ्यबाट पुकार सुनिन थाल्छ – हे प्रभु – हामीलार्इ बचाउनुहोस् ६-७ पटक, पर्दा खुल्छ, सबै ध्यानमुद्रामा पुकारिरहेका हुन्छन् , उनीहरुका अगाडि शक्तीस्वरुपी देवी देखिन्छन् र हात उठाएर आशीर्वाद दिदै भन्छिन्)
देवी – म तिमीहरुको पुकार सुनेर आएकी हुँ । तिमीहरु कसरी टुहुरा बन्यौ भन्ने मलार्इ थाहा छ । अब तिमीहरुले चिन्ता लिनुपर्दैन । तिमीहरु सबै मेरा शरणमा छौ । तिमीहरुलार्इ जसले टुहुरा बनायो म तिनीहरुको विनाश गर्नेछु ।
(देवी आँखा चिम्लेर ध्यानमुद्रामा बस्छिन्, केही समयपछि नेपथ्यबाट) – ए ! राष्ट्रका अराजकतत्वहरु हो ,म तिमीहरुको विनाश गर्न आएकी हु“ ….. । तरबारको आवज सुनिन्छ र एेया…….एेया………..आत्था……………..आत्था केही पटक सुनिन्छ । यता देवीका आँखा खुल्छन्)
देवी – अब देशमा शान्ति छाउनेछ , देशमा भएका अराजकतत्वलार्इ विनाश गरिदिएँ । अराजकता भन्ने कुरा अब यस देशमा छैन । अब तिमीहरुले खान, बस्न, लेख्न, पढ्न स्वतन्त्र रुपमा पाउनेछौ ।
( सबैले नतमस्तक भएर देवीलार्इ ढोग्छन् । बिस्तारै पर्दा बन्द हुन्छ । नेपथ्यबाट बालबालिकाको स्वर सुनिन्छ – हामीले बाँच्न पायौं ( हामीले खान पायौं , हामीले पढ्न-लेख्न पायौं )
शुभतारा माध्यामिक बिद्यालय
विधा : बाल नाटक | Natak, Padam Lal Kafle. यस रचनालाई बूकमार्क गर्नुहोस् ।